သက်ထင် – Myanmar Home & Decor Magazine Official Website
အိမ်တွင်း အလှဆင် နည်းလမ်းများစွဲမက်ဖွယ် အိမ်ပုံစံလေးများအခြားဆောင်းပါးများကျန်းမာရေးနှင့် စီးပွားရေးအင်တာဗျူး
စာေရးသူ - : သက်ထင်
Resort တစ်ခုအသွင်ခံစားရစေမည့် ဖန်တီးမှုများနှင့်အိမ်
တည်းဖြတ်သူ Myanmar Home and Decoration
ရေးသားသူ သက်ထင် မှ
April 27, 2019 နေ့
အခုဖော်ပြပေးမှာကတော့ သုဝဏ္ဏမြို့နယ် ကျွန်းရွှေမြိုင်လမ်းနဲ့ ယင်းမာမြိုင်လမ်းထောင့်မှာ တည်ရှိတဲ့ လုံးချင်းအိမ်လေးတစ်လုံးရဲ့ တည်ဆောက်ထားပုံလေးဖြစ်ပါတယ်။ မြေအကျယ် ၉၈၈၀ စတုရန်းပေ ပေါ်မှာ စုစုပေါင်း ၁၂၀၀၀ စတုရန်းပေ ရှိတဲ့ အိမ်လေးဖြစ်ပါတယ်။
Basement ပါဝင်တဲ့ သုံးထပ်အဆောက်အဦးဖြစ်ပြီး ရုံးခန်းနဲ့ တွဲလျက် အိမ်လေးပါ။ နေရာချတဲ့ အခါမှာ လမ်းထောင့် အကွက်ဖြစ်တာကြောင့် အိမ်တွေနဲ့ ကပ်နေတဲ့ ဘက်ကို Privacy အရ ခပ်ပိတ်ပိတ်လေးလုပ်ထားပြီး မြင်ကွင်းကောင်းတဲ့ လမ်းဘက်ကို မျက်နှာစာ အနေနဲ့ထားပေးထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။ မျက်နှာစာက အရှေ့ဘက်နဲ့ မြောက်ဘက်ကို မျက်နှာမူပြီးသားလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ လမ်းထောင့်ဘက်ကို အသားပေးယူထားတာဖြစ်ပါတယ်။
တိုက်ပုံစံကတော့ လမ်းကနေကြည့်တဲ့ အခါမှာ အမိုးသုံးခုဆက်နေတဲ့ အဆောက်အအုံဖြစ်ပါတယ်။ အမိုးတွေက တစ်ခုနဲ့ တစ်ခု တစ်ထပ်၊ နှစ်ထပ် ၊ သုံးထပ် တဆင့်စီ တက်သွားတဲ့ ပုံစံမျိုး မြင်တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လမ်းမ မျက်နှာစာဘက်က ကြည့်တဲ့ အခါ ပိတ်ပိတ်ကြီးဖြစ်မနေပဲ တဆင့်တဆင့် တက်သွားတာမျိုးမြင်ရပါတယ်။ ညာဘက်အစွန်ဆုံး အမိုးကတော့ ကျယ်ဝန်းတဲ့ကားဂိုထောင် ဖြစ်ပြီး အဆောက်အအုံရဲ့ ဘယ်ဘက်ခြမ်းက အမိုးမှာ ၂ထပ် ရှိပြီး နေရာမှာတော့ အိပ်ခန်းတွေနဲ့ ၊ private ဧည့်ခန်းလေး ရှိပါတယ်။ ကျယ်ဝန်းတဲ့ကားပါကင် ထည့်ထားတာကတော့ အိမ်တစ်ခုတည်းအတွက် မဟုတ်ပဲ ရုံးကိုလာတဲ့ ဧည့်သည်တွေအတွက်ပါ ထည့်သွင်း စဉ်းစားပေးထားတာပါ။ အဆောက်အအုံရဲ့အလည်ကတော့ သုံးထပ်ရှိတာ ဖြစ်ပြီး အောက်ဆုံးထပ်မှာ ဧည့်ခန်း၊ ထမင်းစားခန်း ၊ မီးဖိုခန်း ၊ ရုံးဝန်ထမ်းတွေအတွက် ရုံးခန်းနဲ့ MD ရုံးခန်းရှိပါတယ်။ MD ရုံးခန်းရှေ့မှာတော့ ရေကန်ငယ်လေးတစ်ခုလည်း ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။ အလည်ထပ်နဲ့ အပေါ်ထပ်တွေမှာတော့ အိပ်ခန်းတွေရှိပါတယ်။ ရုံးကို လာတဲ့ အခါမှာ အိမ်ရဲ့ ပင်မ ဝင်ပေါက်ဘက်က ဝင်စရာမလိုပဲ ကားဂိုထောင် ဘေးမှာ ရုံးအတွက် ဝင်ပေါက်တစ်ခု သီးသန့် ထားပေးထားပါတယ်။
Landscaping အနေနဲ့ ခြံထဲမှာ လှလှပပ သာသာယာယာလေးဖြစ်အောင် ဖန်တီးပေးထားပါတယ်။ အပင်ကြီးတွေ အနေနဲ့Fox Tal (မြေခွေးမြီး) နဲ့ အုန်းပွှားပင်တွေ သုံးပေးထားပြီးပင်စည်အောက်ခြေကို ပတ်ပတ်လည် ပုဏ္ဏရိပ်ရောင်စုံလေးတွေ သုံးပေးထားပါတယ်။ စက္ကူပန်း၊ ကြိမ်စပ်၊ တောင်လန်း (Chinese Fam Palm) နဲ့ ဂမုန်းပင်တွေ ကို ထည့်သွင်းပေးထားတာကြောင့် အိမ်ထဲနေပဲ ကြည့်ကြည့်၊ အိမ်အပြင်ဘက်နေပဲ ကြည့်ကြည့် မြင်ကွင်းကောင်းလေးတစ်ခု ဖြစ်နေပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ Landscaping ကို ခြံထဲမှာတင်မကပဲ ခြံအပြင်လမ်းမဘက်ကိုပါ လှလှပပလေး ဖန်တီးပေးထားပါတယ်။ ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ နေရာတင်မဟုတ်ပဲ ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်ပါ သာယာတဲ့နေရာလေးဖြစ်အောင်ပါ ဖန်တီးပေးထားပါတယ်။ ခြံစည်းရိုးအပြင်ဘက်အောက်ခြေတလျှောက် မှာ Flower Boxလေး ရှိပြီး လျှောက်လမ်း ရှိမယ်။ ပြီးတော့ လျှောက်လမ်းဘေးမှာ လျှောက်လမ်းနဲ့ ကားလမ်းမကိုခြားထားတဲ့ မြက်ခင်းလေးလည်း ရှိပါတယ်။ ဒါကတော့ လမ်းလျှောက်တဲ့သူတွေအတွက် အန္တရာယ်ကင်းစေပါတယ်။
အဆောက်အအုံရဲ့ ပြတင်းတွေမှာ လေဒဏ်၊ မိုးဒဏ်တွေကို ခံနိုင်ဖို့အတွက် sunshade/rainshade အမိုးတွေ တပ်ထားတာတွေ့ရပါတယ်။ ဒီ အမိုးလေးတွေက နေဒဏ်၊ မိုးဒဏ် ကာကွယ်နိုင်တဲ့အပြင် အထဲကနေ အပြင်ကိုကြည့်တဲ့ အခါမှာ မြင်ကွင်းကို ကွယ်နေတာမျိုး လုံးဝမဖြစ်ပါဘူး။ အဲ့ဒါလေးကတော့ ထူးထူးခြားခြား ဖြစ်သွားပါတယ်။ အပြင်ကနေ အဆောက်အအုံကို မြင်ရတဲ့ အခါမှာလည်း လှသွားပါတယ်။ ဒါကို အလှအပအနေနဲ့ ထည့်ခဲ့တာမဟုတ်ပဲ လိုအပ်ချက်အရ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရာကနေ ၊ အဆင်ပြေဆုံးဖြစ်အောင် ပညာနဲ့ တန်ဆာဆင်ခဲ့တာလို့ သိရပါတယ်။ လိုအပ်ချက်အရစဉ်းစားရာကနေ အလှအပတွေက နောက်ကနေပါလာခဲ့တာပါ။
အဆောက်အအုံမှာ material အနေနဲ့က သစ်၊ သဘာဝကျောက်နဲ့ ပုံမှန်သုတ်ဆေးကို အချိုးအကျကျ သုံးထားပါတယ်။ အဓိက က material တွေအများကြီး ပြွတ်နေအောင် မသုံးပဲ အရောင်ကအစ လိုက်ဖက်ညီအောင် ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလေး ဖြစ်အောင် သုံးထားတာကြောင့် တစ်ဘက်ဘက်မှာ လေးမနေပဲ ဟန်ချက်ညီနေပါတယ်။ သဘာဝပစ္စည်းတွေကိုသာ သုံးထားတာကြောင့် နွေးထွေးမှုကို ခံစားရပြီး ဘယ်တော့မှ မရိုးနိုင်တဲ့ ပုံစံမျိုး ဖြစ်စေပါတယ်။
အဆောက်အအုံကို ဇုံအနေနဲ့ပြောရရင် Public area ၊ Semi-public area နဲ့ Private area ဆိုပြီး ရှိနေပါတယ်။ ညာဘက် မြေညီကနေ ကြည့်မယ်ဆိုရင် ကားပါကင် ၊ office အခန်း ရှိတယ်၊ MD room ရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီကနေတဆင့် Living room ရှိပါတယ်။ Living room ကိုလည်းသီးသန့် ပိတ်ထားတာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ ရုံးခန်းနဲ့ ဆက်ပေးထားပါတယ်။ အိမ်က ဧည့်သည်အတွက်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ၊ ရုံးက ဧည့်သည်အတွက်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
သီးသန့် တွေ့ချင်တဲ့ ဧည့်သည်အတွက်တော့ ဘယ်ဘက်ခြမ်းမှာ private living room တစ်ခု ရှိပါတယ်။ Public area နဲ့ Private area ကို Semi-public နဲ့ ခြားထားတဲ့ သဘော၊ တစ်နည်းပြောရရင် ချိတ်ဆက်ပေးထားတဲ့ သဘောဖြစ်ပါတယ်။ အလည်လှေကားကနေ အပေါ်တက်သွားရင် ဘယ်ဘက်မှာ အိပ်ခန်းတွေ ရှိမယ် ပြီးတော့ ညာဘက် Office ရဲ့အပေါ်တည့်တည့်မှာ office meeting room စသဖြင့် ရှိပါတယ်။ ပြောရရင်တော့ ညာဘက်ခြမ်းက office ဖြစ်ပြီး၊ ဘယ်ဘက်ခြမ်းက အိမ်ခန်းဖြစ်ပါတယ်။ လှေကားမှာတော့ တစ်ခုခုနဲ့ ပိတ်လိုက်တဲ့အခါ လှေကားက ကျဉ်းသလို ခံစားရတတ်တာကြောင့် မှန်တွေနဲ့ သုံးထားပါတယ်။ ပုံမှန်သုံးနေကျ စတီးဖရိန်တွေပါ မထည့်ပဲ မှန်နဲ့ပဲ သေသေချာချာလေး သုံးပေးထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ လှေကားရဲ့ထုံးစံအရ လှေကားလက်ကိုင် ထည့်သွင်းဖို့ လိုအပ်တာကြောင့် လက်ကိုင်ကို ပိတ်နေတဲ့နံရံဘက်မှာ ထည့်ပေးထားပါတယ်။ အဖွင့်ဘက်မှာတော့ မှန်တွေကလွဲလို့ ဘာမှမထည့်ထားတော့ပါဘူး။ လက်ကိုင်တွေကလည်း ဦးတည်ချက်တွေကို ညွှန်ပြပေးသလို၊ မီးလေးတွေလည်း ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။
ဒီမှာက အိမ်ခန်းတော်တော်များပါတယ်။ Master bed room ၃ခန်း အပါအဝင် အိပ်ခန်း ၈ ခန်း ပါ ပါတယ်။ အိမ်ရှင် client က ရုံးကိုလာတဲ့ နိုင်ငံခြားသား ဧည့်သည်တွေအတွက်ပါ နေလို့ရအောင် စိတ်ကူးထားတာဖြစ်ပါတယ် လို့ သိရပါတယ်။
အခန်းတွေရဲ့နံရံတွေမှာ သုတ်ဆေးနဲ့ သစ် ၂မျိုးသုံးပေးထားပါတယ်။ ဒီနေရာမှာသစ် pattern တွေ တွေ့ရပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ သစ်သားတွေက ရာသီဥတုကြောင့် ကျုံ့ ကြွတာတွေ ဖြစ်လေ့ ရှိပါတယ်။ ပထမ လုပ်ထားတဲ့ အချိန်မှာ ကောင်းနေပေမယ့် နှစ်ကြာလာတဲ့ အခါ ကြွလာတတ်တယ်၊ စပ်ထားတဲ့နေရာမှာ လိုင်းတွေပေါ်လာမယ်။ အဲ့ဒီအချက်ကို ဘယ်လို ဖျောက်လို့ရမလဲ စဉ်းစားတဲ့ အခါမှာ တလွှာထဲတော့ မရဘူး၊ စပ်ထားတဲ့နေရာမှာ အပေါ်က လိုင်းလေးတွေ ထပ်ထည့်လိုက်ပါတယ်။ အဲ့ဒီကနေမှ pattern ပေါ်လာတယ်၊ ဒီဇိုင်းဖြစ်သွားတယ်။ အရှေ့ကပြောခဲ့သလိုပဲ တမင်လှအောင်ထည့်ထားတာ မဟုတ်ပဲ ပေါ်လာတဲ့ လိုအပ်ချက်တွေပေါ်မှာမှ အတတ်ပညာနဲ့ တန်ဆာဆင်ပြီး ပြန်ပြီးဖန်တီးယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
အခန်းတစ်ခန်းထဲ ဝင်သွားတဲ့အခါတွေ့ရတာက မျက်နှာကျက်အလည်တည့်တည့်မှာ တစ်ခန်းနဲ တစ်ခန်း ပုံစံမတူတဲ့ မီးဆိုင်းတွေ ထားပေးပါတယ်။ အဲနေရာမှာ မျက်နှာကျက်ကို သစ် pattern တွေ သုံးထားပြီး မျက်နှာကျက်ကိုလည်း ပိုမြင့်ပေးထားတာကို တွေ့ရပါတယ်။ အခန်းတွင်းမီးရောင် လုံလောက်မှု ရှိဖို့အတွက် သစ်သားမျက်နှာကျက်မဟုတ်တဲ့ နေရာတွေမှာ down light တွေ ထပ်ထည့်ပေးထားပါတယ်။တစ်ခန်းနဲ့ တစ်ခန်းကို ဒီမျက်နှာကျက်က pattern လိုင်းတွေက ဆွဲခေါ်သွားပြီး တစ်နေရာမှာ ပြန်ကျသွားတာမျိုး ဖန်တီးထားပါတယ်။ ဒီ pattern ကိုပဲ အခန်းရဲ့ နံရံမှာ သုံးမလား၊ မျက်နှာကျက်မှာ သုံးမလား စသဖြင့် တစ်အိမ်လုံးမှာ concept မိအောင်ဖန်တီးပေးထားပါတယ်။
ပရိဘောဂတွေ သုံးတဲ့ အခါမှာတော့ မျက်နှာကျက်တို့ နံရံတို့မှာ ဒီဇိုင်းက အရမ်းအားကောင်းနေတာကြောင့် အရမ်းအကြီးကြီးတွေ မသုံးတော့ပဲ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးဖြစ်မယ့် Modern Style တွေကို ရွေးချယ်ပေးထားပါတယ်။ Material အနေနဲ့ Fabric နဲ့ Leather ကို သုံးထားပါတယ်။ ပန်းချီကားတွေကိုလည်း မန္တလေးက ပန်းချီဆရာကြီးတစ်ဦးဆီမှာ လိုချင်တဲ့ ပုံကို သေချာပြောဆိုပြီး အပ်ယူခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ အိမ်ကိုလာတဲ့ ဧည့်သည်တွေမှာ နိုင်ငံခြားသားတွေပါဝင်တာကြောင့် မြန်မာ့ဓလေ့၊ ယဉ်ကျေးမှုအငွေ့အသက်တွေကို ထည့်သွင်းရေးဆွဲ စေခဲ့ပါတယ်။
ဒီအဆောက်အအုံမှာ နောက်ထပ် ဆွဲဆောင်မှု ရှိနေတာကတော့ Outdoor Bathroom ပါ။ ပုံမှန်ဆို ရေချိုးခန်း၊ အိမ်သာကို အတွင်းဘက်မှာ အပိတ်နဲ့ အလုံထားလေ့ ရှိပါတယ်။ လေဝင်ပေါက်ဆိုရင်လည်း သေးသေးလေးလေးတွေပဲ ထည့်လေ့ရှိပါတယ်။ ဒီမှာတော့ concept ကို ပြောင်းထားတာ တွေ့ရပါတယ်။ “ရေချိုးခန်းဆိုတာက သန့်သန့်ရှင်းရှင်း ရှိရမယ်၊ အပန်းဖြေတဲ့ နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အပန်းဖြေတဲ့ နေရာမှာ ပိတ်ပိတ်ကြီးထဲမှာ ဝင်ပြီး ပြန်ထွက်သွားတာမျိုးထပ် ဒီလို outdoor space လေးက ပိုကောင်းပါတယ်။ outdoor bathroom ကို လိုက်ဖက်မယ့် project တိုင်းမှာလုပ်ချင်ပါတယ်” လို့လည်း သိရပါတယ်။ “ ဒီဇိုင်းဆွဲတဲ့ အခါ စဉ်းစားကြည့်တော့ ရေချိုးခန်း၊ အိမ်သာက privacy ရှိဖို့ လိုပါတယ်။ အပြင်ဘက်က သာသာယာယာရှိတာလေးတွေလည်း မြင်ရစေချင်တယ်။ ဒါ့ကြောင် အိမ်တွေရှိတဲ့ privacy ထိမယ့် နေရာတွေမှာ နံရံတွေ သုံးပြီး၊ တခြား လွတ်လွတ်လပ်လပ်ရှိမယ့် နေရာမှာတော့ outdoor space လေးထားပေးထားပါတယ်။ ကိုယ်တိုင်သွားနေကြည့်တဲ့ အခါမှာလည်း privacy ရှိတယ်၊ လွတ်လွတ်လပ်လပ်လေးလည်း နေလို့ ရတယ်ဆိုတာ သိရပါတယ် ” လို့ သိရပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက ဒီမှာတော့ outdoor decking နဲ့ ဆက်ထားပြီး flower box လေးတွေနဲ့ အပင်စိုက်ထားပြီး private outdoor space လေး မှာ အပန်းဖြေနိုင်အောင် ဖန်တီးပေးထားတာပါ။ အိမ်ရဲ့ရေချိုးခန်းတစ်ခုလို့ မခံစားရပဲ resort တစ်ခုကို ရောက်နေသလိုတောင် ခံစားရစေပါတယ်။
ဒီ project လေးကို spine architect က ၂၀၁၃ ခုနှစ်မှာ ဒီဇိုင်းစဆွဲခဲ့တာဖြစ်ပြီး ၂၀၁၆ ခုနှစ်မှာအပြီးသတ် ဆောက်လုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ကြားထဲမှာ ပရိဘောဂတွေ စိတ်တိုင်းကျဖြစ်စေဖို့ အပ်နှံရတာတွေ၊ M&E ၊ Construction တွေနဲ့ ကြိုတင်ညှိနှိုင်းရတာတွေလည်း ရှိခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ အားလုံးပြီးသွားတဲ့ အခါမှာတော့ Client အတွက် စိတ်ကျေနပ်မှု အပြည့်အဝပေးနိုင်တဲ့ project လေးတစ်ခု ဖြစ်နေပါတော့တယ်။
အခုေဖာ္ျပေပးမွာကေတာ့ သု၀ဏၰၿမိဳ႕နယ္ ကၽြန္းေရႊၿမိဳင္လမ္းနဲ႔ ယင္းမာၿမိဳင္လမ္းေထာင့္မွာ တည္ရွိတဲ့ လံုးခ်င္းအိမ္ေလးတစ္လံုးရဲ႕ တည္ေဆာက္ထားပံုေလးျဖစ္ပါတယ္။ ေျမအက်ယ္ ၉၈၈၀ စတုရန္းေပ ေပၚမွာ စုစုေပါင္း ၁၂၀၀၀ စတုရန္းေပ ရွိတဲ့ အိမ္ေလးျဖစ္ပါတယ္။ Basement ပါ၀င္တဲ့ သံုးထပ္အေဆာက္အဦးျဖစ္ၿပီး ရံုးခန္းနဲ႔ တြဲလ်က္ အိမ္ေလးပါ။ ေနရာခ်တဲ့ အခါမွာ လမ္းေထာင့္ အကြက္ျဖစ္တာေၾကာင့္ အိမ္ေတြနဲ႔ ကပ္ေနတဲ့ ဘက္ကို Privacy အရ ခပ္ပိတ္ပိတ္ေလးလုပ္ထားၿပီး ျမင္ကြင္းေကာင္းတဲ့ လမ္းဘက္ကို မ်က္ႏွာစာ အေနနဲ႔ထားေပးထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ မ်က္ႏွာစာက အေရွ႕ဘက္နဲ႔ ေျမာက္ဘက္ကို မ်က္ႏွာမူၿပီးသားလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ လမ္းေထာင့္ဘက္ကို အသားေပးယူထားတာျဖစ္ပါတယ္။
တိုက္ပံုစံကေတာ့ လမ္းကေနၾကည့္တဲ့ အခါမွာ အမိုးသံုးခုဆက္ေနတဲ့ အေဆာက္အအံုျဖစ္ပါတယ္။ အမိုးေတြက တစ္ခုနဲ့ တစ္ခု တစ္ထပ္၊ ႏွစ္ထပ္ ၊ သံုးထပ္ တဆင့္စီ တက္သြားတဲ့ ပံုစံမ်ိဳး ျမင္ေတြ႔ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လမ္းမ မ်က္ႏွာစာဘက္က ၾကည့္တဲ့ အခါ ပိတ္ပိတ္ႀကီးျဖစ္မေနပဲ တဆင့္တဆင့္ တက္သြားတာမ်ိဳးျမင္ရပါတယ္။ ညာဘက္အစြန္ဆံုး အမိုးကေတာ့ က်ယ္၀န္းတဲ့ကားဂိုေထာင္ ျဖစ္ၿပီး အေဆာက္အအံုရဲ႕ ဘယ္ဘက္ျခမ္းက အမိုးမွာ ၂ထပ္ ရွိၿပီး ေနရာမွာေတာ့ အိပ္ခန္းေတြနဲ႔ ၊ private ဧည့္ခန္းေလး ရွိပါတယ္။ က်ယ္၀န္းတဲ့ကားပါကင္ ထည့္ထားတာကေတာ့ အိမ္တစ္ခုတည္းအတြက္ မဟုတ္ပဲ ရံုးကိုလာတဲ့ ဧည့္သည္ေတြအတြက္ပါ ထည့္သြင္း စဥ္းစားေပးထားတာပါ။ အေဆာက္အအံုရဲ႕အလည္ကေတာ့ သံုးထပ္ရွိတာ ျဖစ္ၿပီး ေအာက္ဆံုးထပ္မွာ ဧည့္ခန္း၊ ထမင္းစားခန္း ၊ မီးဖိုခန္း ၊ ရံုး၀န္ထမ္းေတြအတြက္ ရံုးခန္းနဲ႔ MD ရံုးခန္းရွိပါတယ္။ MD ရံုးခန္းေရွ႕မွာေတာ့ ေရကန္ငယ္ေလးတစ္ခုလည္း ထည့္သြင္းေပးထားပါတယ္။ အလည္ထပ္နဲ႔ အေပၚထပ္ေတြမွာေတာ့ အိပ္ခန္းေတြရွိပါတယ္။ ရံုးကို လာတဲ့ အခါမွာ အိမ္ရဲ႕ ပင္မ ၀င္ေပါက္ဘက္က ၀င္စရာမလိုပဲ ကားဂိုေထာင္ ေဘးမွာ ရံုးအတြက္ ၀င္ေပါက္တစ္ခု သီးသန္႔ ထားေပးထားပါတယ္။
Landscaping အေနနဲ့ ၿခံထဲမွာ လွလွပပ သာသာယာယာေလးျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးေပးထားပါတယ္။ အပင္ႀကီးေတြ အေနနဲ့Fox Tal (ေျမေခြးၿမီး) နဲ႔ အုန္းပႊားပင္ေတြ သံုးေပးထားၿပီးပင္စည္ေအာက္ေျခကို ပတ္ပတ္လည္ ပုဏၰရိပ္ေရာင္စံုေလးေတြ သံုးေပးထားပါတယ္။ စကၠဴပန္း၊ ႀကိမ္စပ္၊ ေတာင္လန္း (Chinese Fam Palm) နဲ႔ ဂမုန္းပင္ေတြ ကို ထည့္သြင္းေပးထားတာေၾကာင့္ အိမ္ထဲေနပဲ ၾကည့္ၾကည့္၊ အိမ္အျပင္ဘက္ေနပဲ ၾကည့္ၾကည့္ ျမင္ကြင္းေကာင္းေလးတစ္ခု ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ Landscaping ကို ၿခံထဲမွာတင္မကပဲ ၿခံအျပင္လမ္းမဘက္ကိုပါ လွလွပပေလး ဖန္တီးေပးထားပါတယ္။ ကိုယ္ပိုင္ဆိုင္တဲ့ ေနရာတင္မဟုတ္ပဲ ကိုယ့္ပတ္၀န္းက်င္အတြက္ပါ သာယာတဲ့ေနရာေလးျဖစ္ေအာင္ပါ ဖန္တီးေပးထားပါတယ္။ ၿခံစည္းရိုးအျပင္ဘက္ေအာက္ေျခတေလွ်ာက္ မွာ Flower Boxေလး ရွိၿပီး ေလွ်ာက္လမ္း ရွိမယ္။ ၿပီးေတာ့ ေလွ်ာက္လမ္းေဘးမွာ ေလွ်ာက္လမ္းနဲ႔ ကားလမ္းမကိုျခားထားတဲ့ ျမက္ခင္းေလးလည္း ရွိပါတယ္။ ဒါကေတာ့ လမ္းေလွ်ာက္တဲ့သူေတြအတြက္ အႏၱရာယ္ကင္းေစပါတယ္။
အေဆာက္အအံုရဲ႕ ျပတင္းေတြမွာ ေလဒဏ္၊ မိုးဒဏ္ေတြကို ခံႏိုင္ဖို႔အတြက္ sunshade/rainshade အမိုးေတြ တပ္ထားတာေတြ႔ရပါတယ္။ ဒီ အမိုးေလးေတြက ေနဒဏ္၊ မိုးဒဏ္ ကာကြယ္ႏိုင္တဲ့အျပင္ အထဲကေန အျပင္ကိုၾကည့္တဲ့ အခါမွာ ျမင္ကြင္းကို ကြယ္ေနတာမ်ိဳး လံုး၀မျဖစ္ပါဘူး။ အဲ့ဒါေလးကေတာ့ ထူးထူးျခားျခား ျဖစ္သြားပါတယ္။ အျပင္ကေန အေဆာက္အအံုကို ျမင္ရတဲ့ အခါမွာလည္း လွသြားပါတယ္။ ဒါကို အလွအပအေနနဲ႔ ထည့္ခဲ့တာမဟုတ္ပဲ လိုအပ္ခ်က္အရ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရာကေန ၊ အဆင္ေျပဆံုးျဖစ္ေအာင္ ပညာနဲ႔ တန္ဆာဆင္ခဲ့တာလို႔ သိရပါတယ္။ လိုအပ္ခ်က္အရစဥ္းစားရာကေန အလွအပေတြက ေနာက္ကေနပါလာခဲ့တာပါ။
အေဆာက္အအံုမွာ material အေနနဲ႔က သစ္၊ သဘာ၀ေက်ာက္နဲ႔ ပံုမွန္သုတ္ေဆးကို အခ်ိဳးအက်က် သံုးထားပါတယ္။ အဓိက က material ေတြအမ်ားႀကီး ႁပြတ္ေနေအာင္ မသံုးပဲ အေရာင္ကအစ လိုက္ဖက္ညီေအာင္ ေပါ့ေပါ့ပါးပါးေလး ျဖစ္ေအာင္ သံုးထားတာေၾကာင့္ တစ္ဘက္ဘက္မွာ ေလးမေနပဲ ဟန္ခ်က္ညီေနပါတယ္။ သဘာ၀ပစၥည္းေတြကိုသာ သံုးထားတာေၾကာင့္ ေႏြးေထြးမႈကို ခံစားရၿပီး ဘယ္ေတာ့မွ မရိုးႏိုင္တဲ့ ပံုစံမ်ိဳး ျဖစ္ေစပါတယ္။
အေဆာက္အအံုကို ဇံုအေနနဲ႔ေျပာရရင္ Public area ၊ Semi-public area နဲ႔ Private area ဆိုၿပီး ရွိေနပါတယ္။ ညာဘက္ ေျမညီကေန ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ကားပါကင္ ၊ office အခန္း ရွိတယ္၊ MD room ရွိပါတယ္။ အဲ့ဒီကေနတဆင့္ Living room ရွိပါတယ္။ Living room ကိုလည္းသီးသန့္ ပိတ္ထားတာမ်ိဳးမဟုတ္ပဲနဲ႔ ရံုးခန္းနဲ႔ ဆက္ေပးထားပါတယ္။ အိမ္က ဧည့္သည္အတြက္ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ၊ ရံုးက ဧည့္သည္အတြက္ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။ သီးသန္႔ ေတြ႔ခ်င္တဲ့ ဧည့္သည္အတြက္ေတာ့ ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွာ private living room တစ္ခု ရွိပါတယ္။ Public area နဲ့ Private area ကို Semi-public နဲ႔ ျခားထားတဲ့ သေဘာ၊ တစ္နည္းေျပာရရင္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးထားတဲ့ သေဘာျဖစ္ပါတယ္။ အလည္ေလွကားကေန အေပၚတက္သြားရင္ ဘယ္ဘက္မွာ အိပ္ခန္းေတြ ရွိမယ္ ၿပီးေတာ့ ညာဘက္ Office ရဲ႕အေပၚတည့္တည့္မွာ office meeting room စသျဖင့္ ရွိပါတယ္။ ေျပာရရင္ေတာ့ ညာဘက္ျခမ္းက office ျဖစ္ၿပီး၊ ဘယ္ဘက္ျခမ္းက အိမ္ခန္းျဖစ္ပါတယ္။ ေလွကားမွာေတာ့ တစ္ခုခုနဲ႔ ပိတ္လိုက္တဲ့အခါ ေလွကားက က်ဥ္းသလို ခံစားရတတ္တာေၾကာင့္ မွန္ေတြနဲ႔ သံုးထားပါတယ္။ ပံုမွန္သံုးေနက် စတီးဖရိန္ေတြပါ မထည့္ပဲ မွန္နဲ႔ပဲ ေသေသခ်ာခ်ာေလး သံုးေပးထားတာကိုေတြ႔ရပါတယ္။ ေလွကားရဲ႕ထံုးစံအရ ေလွကားလက္ကိုင္ ထည့္သြင္းဖို႔ လိုအပ္တာေၾကာင့္ လက္ကိုင္ကို ပိတ္ေနတဲ့နံရံဘက္မွာ ထည့္ေပးထားပါတယ္။ အဖြင့္ဘက္မွာေတာ့ မွန္ေတြကလြဲလို႔ ဘာမွမထည့္ထားေတာ့ပါဘူး။ လက္ကိုင္ေတြကလည္း ဦးတည္ခ်က္ေတြကို ညႊန္ျပေပးသလို၊ မီးေလးေတြလည္း ထည့္သြင္းေပးထားပါတယ္။
ဒီမွာက အိမ္ခန္းေတာ္ေတာ္မ်ားပါတယ္။ Master bed room ၃ခန္း အပါအ၀င္ အိပ္ခန္း ၈ ခန္း ပါ ပါတယ္။ အိမ္ရွင္ client က ရံုးကိုလာတဲ့ ႏိုင္ငံျခားသား ဧည့္သည္ေတြအတြက္ပါ ေနလို႔ရေအာင္ စိတ္ကူးထားတာျဖစ္ပါတယ္ လို႔ သိရပါတယ္။
အခန္းေတြရဲ႕နံရံေတြမွာ သုတ္ေဆးနဲ႔ သစ္ ၂မ်ိဳးသံုးေပးထားပါတယ္။ ဒီေနရာမွာသစ္ pattern ေတြ ေတြ႔ရပါတယ္။ အေၾကာင္းကေတာ့ သစ္သားေတြက ရာသီဥတုေၾကာင့္ က်ဳံ႕ ႂကြတာေတြ ျဖစ္ေလ့ ရွိပါတယ္။ ပထမ လုပ္ထားတဲ့ အခ်ိန္မွာ ေကာင္းေနေပမယ့္ ႏွစ္ၾကာလာတဲ့ အခါ ႂကြလာတတ္တယ္၊ စပ္ထားတဲ့ေနရာမွာ လိုင္းေတြေပၚလာမယ္။ အဲ့ဒီအခ်က္ကို ဘယ္လို ေဖ်ာက္လို႔ရမလဲ စဥ္းစားတဲ့ အခါမွာ တလႊာထဲေတာ့ မရဘူး၊ စပ္ထားတဲ့ေနရာမွာ အေပၚက လိုင္းေလးေတြ ထပ္ထည့္လိုက္ပါတယ္။ အဲ့ဒီကေနမွ pattern ေပၚလာတယ္၊ ဒီဇိုင္းျဖစ္သြားတယ္။ အေရွ႕ကေျပာခဲ့သလိုပဲ တမင္လွေအာင္ထည့္ထားတာ မဟုတ္ပဲ ေပၚလာတဲ့ လိုအပ္ခ်က္ေတြေပၚမွာမွ အတတ္ပညာနဲ႔ တန္ဆာဆင္ၿပီး ျပန္ၿပီးဖန္တီးယူခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။
အခန္းတစ္ခန္းထဲ ၀င္သြားတဲ့အခါေတြ႔ရတာက မ်က္ႏွာက်က္အလည္တည့္တည့္မွာ တစ္ခန္းနဲ တစ္ခန္း ပံုစံမတူတဲ့ မီးဆိုင္းေတြ ထားေပးပါတယ္။ အဲေနရာမွာ မ်က္ႏွာက်က္ကို သစ္ pattern ေတြ သံုးထားၿပီး မ်က္ႏွာက်က္ကိုလည္း ပုိျမင့္ေပးထားတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ အခန္းတြင္းမီးေရာင္ လုံေလာက္မႈ ရွိဖို႔အတြက္ သစ္သားမ်က္ႏွာက်က္မဟုတ္တဲ့ ေနရာေတြမွာ down light ေတြ ထပ္ထည့္ေပးထားပါတယ္။တစ္ခန္းနဲ႔ တစ္ခန္းကို ဒီမ်က္ႏွာက်က္က pattern လိုင္းေတြက ဆြဲေခၚသြားၿပီး တစ္ေနရာမွာ ျပန္က်သြားတာမ်ိဳး ဖန္တီးထားပါတယ္။ ဒီ pattern ကိုပဲ အခန္းရဲ႔ နံရံမွာ သံုးမလား၊ မ်က္ႏွာက်က္မွာ သံုးမလား စသျဖင့္ တစ္အိမ္လံုးမွာ concept မိေအာင္ဖန္တီးေပးထားပါတယ္။
ပရိေဘာဂေတြ သုံးတဲ့ အခါမွာေတာ့ မ်က္ႏွာက်က္တို႔ နံရံတို႔မွာ ဒီဇိုင္းက အရမ္းအားေကာင္းေနတာေၾကာင့္ အရမ္းအႀကီးႀကီးေတြ မသံုးေတာ့ပဲ ေပါ့ေပါ့ပါးပါးျဖစ္မယ့္ Modern Style ေတြကို ေရြးခ်ယ္ေပးထားပါတယ္။ Material အေနနဲ႔ Fabric နဲ႔ Leather ကို သံုးထားပါတယ္။ ပန္းခ်ီကားေတြကိုလည္း မႏၱေလးက ပန္းခ်ီဆရာႀကီးတစ္ဦးဆီမွာ လိုခ်င္တဲ့ ပံုကို ေသခ်ာေျပာဆိုၿပီး အပ္ယူခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။ အိမ္ကိုလာတဲ့ ဧည့္သည္ေတြမွာ ႏိုင္ငံျခားသားေတြပါ၀င္တာေၾကာင့္ ျမန္မာ့ဓေလ့၊ ယဥ္ေက်းမႈအေငြ႔အသက္ေတြကို ထည့္သြင္းေရးဆြဲ ေစခဲ့ပါတယ္။
ဒီအေဆာက္အအံုမွာ ေနာက္ထပ္ ဆြဲေဆာင္မႈ ရွိေနတာကေတာ့ Outdoor Bathroom ပါ။ ပံုမွန္ဆို ေရခ်ိဳးခန္း၊ အိမ္သာကို အတြင္းဘက္မွာ အပိတ္နဲ႔ အလံုထားေလ့ ရွိပါတယ္။ ေလ၀င္ေပါက္ဆိုရင္လည္း ေသးေသးေလးေလးေတြပဲ ထည့္ေလ့ရွိပါတယ္။ ဒီမွာေတာ့ concept ကို ေျပာင္းထားတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ “ေရခ်ိဳးခန္းဆိုတာက သန္႔သန္႔ရွင္းရွင္း ရွိရမယ္၊ အပန္းေျဖတဲ့ ေနရာတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ အပန္းေျဖတဲ့ ေနရာမွာ ပိတ္ပိတ္ႀကီးထဲမွာ ၀င္ၿပီး ျပန္ထြက္သြားတာမ်ိဳးထပ္ ဒီလို outdoor space ေလးက ပိုေကာင္းပါတယ္။ outdoor bathroom ကို လုိက္ဖက္မယ့္္ project တိုင္းမွာလုပ္ခ်င္ပါတယ္” လို႔လည္း သိရပါတယ္။ “ ဒီဇိုင္းဆြဲတဲ့ အခါ စဥ္းစားၾကည့္ေတာ့ ေရခ်ိဳးခန္း၊ အိမ္သာက privacy ရွိဖို့ လိုပါတယ္။ အျပင္ဘက္က သာသာယာယာရွိတာေလးေတြလည္း ျမင္ရေစခ်င္တယ္။ ဒါ့ေၾကာင္ အိမ္ေတြရွိတဲ့ privacy ထိမယ့္ ေနရာေတြမွာ နံရံေတြ သံုးၿပီး၊ တျခား လြတ္လြတ္လပ္လပ္ရွိမယ့္ ေနရာမွာေတာ့ outdoor space ေလးထားေပးထားပါတယ္။ ကိုယ္တုိင္သြားေနၾကည့္တဲ့ အခါမွာလည္း privacy ရွိတယ္၊ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ေလးလည္း ေနလို႔ ရတယ္ဆိုတာ သိရပါတယ္ ” လို႔ သိရပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက ဒီမွာေတာ့ outdoor decking နဲ႔ ဆက္ထားၿပီး flower box ေလးေတြနဲ႔ အပင္စိုက္ထားၿပီး private outdoor space ေလး မွာ အပန္းေျဖႏိုင္ေအာင္ ဖန္တီးေပးထားတာပါ။ အိမ္ရဲ႕ေရခ်ိဳးခန္းတစ္ခုလို႔ မခံစားရပဲ resort တစ္ခုကို ေရာက္ေနသလိုေတာင္ ခံစားရေစပါတယ္။
ဒီ project ေလးကို spine architect က ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွာ ဒီဇိုင္းစဆြဲခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွာအၿပီးသတ္ ေဆာက္လုပ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ၾကားထဲမွာ ပရိေဘာဂေတြ စိတ္တိုင္းက်ျဖစ္ေစဖို႔ အပ္ႏွံရတာေတြ၊ M&E ၊ Construction ေတြနဲ့ ႀကိဳတင္ညိွႏႈိင္းရတာေတြလည္း ရွိခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အားလံုးၿပီးသြားတဲ့ အခါမွာေတာ့ Client အတြက္ စိတ္ေက်နပ္မႈ အျပည့္အ၀ေပးႏုိင္တဲ့ project ေလးတစ္ခု ျဖစ္ေနပါေတာ့တယ္။
Download eBook version asaFREE!
ဆောင်းပါးများ 132 post
သတင်းနှင့် ပြပွဲများ 55 post
ဈေးဝယ်လမ်းညွှန် 28 post
ဆောင်းပါး 28 post
အင်တာဗျူး 13 post
လူဖတ်အများဆုံး ဆောင်ပါး (၅)ပုဒ်
2020 စုစုပေါင်း 63 ပုဒ် ရှိသည်
9 ပုဒ် July
9 ပုဒ် June
9 ပုဒ် May
4 ပုဒ် April
8 ပုဒ် March
15 ပုဒ် February
9 ပုဒ် January
2019 စုစုပေါင်း 97 ပုဒ် ရှိသည်
6 ပုဒ် December
11 ပုဒ် November
10 ပုဒ် October
13 ပုဒ် September
13 ပုဒ် August
6 ပုဒ် July
3 ပုဒ် June
5 ပုဒ် May
10 ပုဒ် April
2 ပုဒ် March
6 ပုဒ် February
12 ပုဒ် January
2018 စုစုပေါင်း 87 ပုဒ် ရှိသည်
5 ပုဒ် December
7 ပုဒ် November
13 ပုဒ် October
7 ပုဒ် September
10 ပုဒ် August
6 ပုဒ် May
9 ပုဒ် April
11 ပုဒ် March
5 ပုဒ် February
2 ပုဒ် January
2017 စုစုပေါင်း 75 ပုဒ် ရှိသည်
1 ပုဒ် December
11 ပုဒ် October
3 ပုဒ် September
3 ပုဒ် August
10 ပုဒ် July
19 ပုဒ် June
20 ပုဒ် May
1 ပုဒ် April
2016 စုစုပေါင်း 1 ပုဒ် ရှိသည်
1 ပုဒ် July
SCG မှ ၂၀၁၈ ခုနှစ် တတိယသုံးလပတ်နှင့်ပထမ ၉လကြာ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုရလဒ်များကိုကြေငြာ
October 30, 2018 နေ့
သတင်းနှင့် ပြပွဲများ ကဏ္ဍတွင်
SCG ၏ ဥက္ကဌနှင့် စီအီးအိုဖြစ်သူ Mr. Roongrote Rangsiyopash က ၂၀၁၈ ခုနှစ် တတိယသုံးလပတ်အတွက် စာရင်းစစ်ဆေးခြင်း မပြုရသေးသော လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုရလဒ်အရ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းယူနစ်အားလုံးတိုးတက်မှုနှုန်းတို့ကြောင့်စာရင်းသွင်းပြီးသော အရောင်းဝင်ငွေမှာ ယခင်နှစ်ကထက် ၉ ရာခိုင်နှုန်းနှင့် ယခင်သုံးလပတ်ထက် ၂ ရာခိုင်နှုန်း တိုးတက်လာပြီး မြန်မာကျပ်ငွေ ၅၅၆၉ ဘီလျံ (အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၃,၇၁၆ သန်း) ဤကာလအတွင်း အမြတ်ငွေပေါင်းမှာ မြန်မာကျပ်ငွေ ၄၃၁ ဘီလျံ (အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၂၈ရ သန်း) ရရှိခဲ့ရာ ယခင်နှစ်ကထက် ၂ဝ ရာခိုင်နှုန်းနှင့် ယခင်သုံးလပတ်ထက် ၂၄ ရာခိုင်နှုန်း လျော့နည်းပြီး မြန်မာကျပ်ငွေ 76 ဘီလျံ (အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၅၁ သန်း) ရှိပြီးအဓိကအားဖြင့် စာရင်းကိုင်စံချိန်စံညွှန်းများ၊naphtha ဈေးနှုန်းနှင့်ကမာ္ဘ့ရေနံဈေးမြင့်တက်မှုများကြောင့်ဖြစ်ကြောင်ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါအခြေအနေများမရှိပါက SCG သည်ယခုကာလအတွက်အမြတ် မြန်မာကျပ်ငွေ ၅၀ရ ဘီလျံ (အမေရိကန် ဒေါ်လာ၃၃၈ သန်း) ရရှိခဲ့ကြောင်းမှတ်တမ်းတင်ထားရှိခဲ့ပါသည်။
၂၀၁၈ ခုနှစ်ပထမ ၉လကြာလည်ပတ်သည့်ရလဒ်များအရ SCG သည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းယူနစ်အားလုံးတိုးတက်မှုနှုန်းတို့ကြောင့်စာရင်းသွင်းပြီးသော အရောင်းဝင်ငွေမှာ ယခင်နှစ်ကထက် ရ ရာခိုင်နှုန်းတိုးတက်လာပြီး မြန်မာကျပ်ငွေ ၁၅၆၃ရ ဘီလျံ (အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၁၁,၂၃၈ သန်း)ခန့်ရရှိခဲ့သည်။အဆိုပါကာလအတွက်အမြတ်ငွေစုစုပေါင်း မြန်မာကျပ်ငွေ ၁၄၈၄ ဘီလျံ (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁,၀၆ရ သန်း) ခန့်ရရှိခဲ့ပြီး အဓိကအားဖြင့်ဓါတုပစ္စည်းထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းများ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကျဆင်းခြင်းနှင့်တတိယသုံးလပတ်မှရရှိခဲ့သောအားနည်းချက်တို့ကြောင့် ယခင်နှစ်ကထက် ၁၉ ရာခိုင်းနှုန်းကျဆင်းခဲ့သည့်။ ထို့အပြင် ပို့ကုန်မှတဆင့်ရရှိသောဝင်ငွေမှာ ယခင်နှစ်ကထက် ရ ရာခိုင်နှုန်းတိုးတက်လာပြီး မြန်မာကျပ်ငွေ ၄,၂၃၉ ဘီလျံ (အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၃,၀၄ရ သန်း)ခန့်ရရှိခဲ့ပြီး ရောင်းချခြင်းမှတဆင့်ရှိခဲ့သော SCG ၏ဝင်ငွေသည် ၂ရ ရာခိုင်နှုန်းခန့်ရှိသည်ဟုတွက်ချက်သတ်မှတ်သည် ဟု သိရပါသည်။
ဆွဲဆောင်မှုအပြည့်ဖြင့်သင်နဲ့ အတူရှိနေမယ့် Wall Art by Xenon
October 21, 2018 နေ့
ဒီတစ်ပတ် အဖွဲ့သားတွေ ရန်ကုန်မြို့ထဲ အလည်အပတ်သွားရင်း ရောက်ခဲ့တဲ့ ဆိုင်လေး တစ်ခုအကြောင်းပြောပြချင်ပါတယ်။ ဆိုင်လေးအကြောင်းဆိုတာထဲမှာမှ ဆိုင်မှာ ပြင်ဆင်ထားတဲ့ ဆိုင်အပြင်အဆင်ကို အဓိကထားပြောချင်ပါတယ်။ ဆိုင်ကိုဝင်သွားတဲ့အခါ ဆိုင်ရဲ့အခင်းအကျင်းတွေထဲမှာ နံရံကမြင်ကွင်းတွေက စိတ်ကိုဆွဲဆောင်မှုအပြည့်ပေးနေပါတယ်။ ဆိုင်ကိုရောက်လာတဲ့သူတွေအတွက် အတိတ်ကို ပြန်လည်သတိရစေမယ့် အခင်းအကျင်းလေး တစ်ခုပါ။ ၁၉၈ဝ ခုနှစ်ကနေ ၁၉၉၅ ခုနှစ်အတွင်း ရန်ကုန်ရဲ့ အထင်ကရမြင်ကွင်းများစွာက သက်လတ်ပိုင်းအရွယ်တွေအတွက် အတိတ်နေ့ရက်တွေကိ်ု ပြန်လည် သတိရစေမှာပါ။ ရန်ကုန်ရဲ့ အငွေ့အသက်များစွာ လွှမ်းခြုံနေတဲ့လှပတဲ့ မြင်ကွင်းလေးဖြစ်အောင် အဓိက ပံ့ပိုးပေးထားတာက နံရံက Wallpaper တွေပါ။ ၁၉၈ဝ – ၁၉၉၅ အတွင်း ရန်ကုန်မြို့မှာ ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ အထင်ကရ အဖြစ်အပျက်တွေ ၊ သတင်းတွေ သာမက ရန်ကုန်တကúသိုလ်မှအစ ရန်ကုန်ရဲ့ နာမည်ကြီး အဆောက်အဦတွေရဲ့ ပုံရိပ်တွေကို concept ယူပြီး Wallpaper အဖြစ် စိတ်တိုင်းကျ အရည်အသွေးမြင့် ပုံနှိပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဆွဲဆောင်မှုအပြည့်ပေးနေတဲ့ လွမ်းမောဖွယ်ရာ မြင်ကွင်းတွေပါပဲ။ ဆိုင်ကိုလာတဲ့ သူတွေရော၊ မရောက်ဖူးသေးတဲ့သူတွေပါ စိတ်ဝင်တစားနဲ့ ရောက်လာမယ့်နေရာတစ်ခုလို့ထင်မိပါတယ်။
ဒီ Wallpaper တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာမို့ စာဖတ်ပရိသတ်အတွက်ပြန်လည် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီဆိုင်လေးအတွက် Wallpaper တွေကို Wall Art by Xenon မှ တာဝန်ယူ ပုံနှိပ်ပြင်ဆင်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ သုံးထားတဲ့ Wallpaper အကြောင်းလေးကို ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။ Wall art by xenon မှာ Wallpaper တွေအကြောင်းကို လေ့လာ စုံစမ်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ Wall Art by Xenon ရဲ့ Wallpaper တွေက HP Latex Ink ကို အသုံးပြုပုံနှိပ်ထားတာကြောင့် အနံ့ ကင်းစင်တာကို တွေ့ရပါတယ်။ စားသောက်ဆိုင်တွေ ၊ ဘားတွေနဲ့ ကော်ဖီဆိုင်တွေအတွက် ဒါက တကယ့်ကို ရွေးချယ်ဖို့ အသင့်တော်ဆုံး နဲ့ အဓိကကျတဲ့ အချက်ပါ။ မဖြစ်မနေထည့်စဉ်းစားရမယ့် အချက်ပါ။ ဒါကို Wall Art by Xenon ရဲ့ Wallpaper တွေက အာမခံချက်ပေးနိုင်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခုကတော့ အသုံးပြုတဲ့ ကုန်ကြမ်းတွေအကုန်လုံးဟာ ခဲ၊ နီကယ်လ် ဓာတ်များ ကင်းစင်ကြောင်း နိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွှန်းနဲ့ အညီ Eco Logo နဲ့ Green Guard Certificate ရရှိထားတဲ့ အမျိုးအစား လည်းဖြစ်တာကြောင့် ကျန်းမာရေး အတွက်ယုံကြည်စိတ်ချစွာ အသုံးပြုနိုင်မှာပါ။
နောက်ထက်အထူးအားသာချက်ကတော့ ကိုယ်ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ ဒီဇိုင်း၊ ဓာတ်ပုံ ကိုပုံနှိပ်နိုင်တဲ့ အပြင် အတိုင်းအတာကိုလည်း လိုသလောက်အတိအကျ ရနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ့်စိတ်ကူးထဲကအတိုင်း တစ်ထပ်တည်း ပုံဖော်နိုင်မှာပါ။ အနံ့ကင်းစင်တဲ့ HP Latex Ink ကို အသုံးပြုပြီး လိုသလောက် အတိုင်းအတာ ကိုသာပုံနှိပ်ရတာကြောင့် Wallpaper တွေကို မလိုအပ်ပဲ အပိုဝယ်စရာမလိုသလို၊ လိုသွားရင်လည်း အရောင် အဆင် မတူတော့တာမျိုး၊ ဝယ်ရခက်တာမျိုး မဖြစ်တော့ပဲ အလွယ်တကူနဲ့ Wall art by xenon မှာ ထက်မံပြီး ပုံနှိပ်ထုတ်ယူလိုက်ရုံပါပဲ။ အရမ်းကို အဆင်ပြေနေပါပြီ။ နောက်တစ်ခုက အခုနောက်ပိုင်းမှာခေတ်ရဲ့ အလိုအရ အခန်းအပြင်အဆင်ကို အချိန်ကာလအလိုက် ပြောင်းလဲ ပေးဖို့လိုပါတယ်။ ဒီလို ပြောင်းလဲချင်တဲ့အခါ အလွယ်တကူပြောင်းလဲနိုင်တာကလည်း Wallpaper တွေရဲ့ အားသာချက်တစ်ခုပါ။ ဒါတွေအားလုံး အဆင်ပြေစေဖို့က Wall Art by Xenon မှာ ရနိုင်ပါတယ်။ Wall Art by Xenonမှာ ရွေးချယ်စရာ ဒီဇိုင်းတွေအဆင်သင့်ရှိပါတယ်။ ဒီထဲကမဟုတ်ပဲ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ ပုံကို ပေးပြီးလည်း ပုံနှိပ် ရယူနိုင်တာကြောင့် မိမိလုပ်ငန်းနဲ့ အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်မယ့် ၊ မိမိရဲ့ ဖောက်သည်တွေကို ဆွဲဆောင်မှု အပြည့်ပေးနိုင်မယ့် အပြင်အဆင်တွေနဲ့ ပိုမိုအောင်မြင်တဲ့ လုပ်ငန်း တစ်ခုဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ ဒီဇိုင်းလည်းရမယ်၊ ပစöည်းအပိုအလိုမရှိ တပ်ဆင်ရလွယ်ကူ အချိန်ကုန်သက်သာတာကြောင့် ကုန်ကျစရိတ်တွေအလေအလွင့်မဖြစ်ဘူး ၊ အရည်အသွေးကောင်းတယ်၊ ကျန်းမာရေးအတွက်လည်း စိတ်ချရတဲ့ Eco Logo နဲ့ Green Guard Certificate ရရှိထားပြီး ၊ ခေတ်နဲ့အညီ ပြင်ဆင်ရတာလည်းလွယ်တယ်ဆိုတော့ Wall Art by Xenon ရဲ့ Wallpaper တွေက အသုံးပြုဖို့ အကောင်းဆုံးပါပဲ။ အခုလိုပဲ စားသောက်ဆိုင်၊ ကော်ဖီဆိုင်၊ ဘားတွေအတွက် လိုက်ဖက်ညီသင့်တော်မယ့် ဒီဇိုင်းတွေနဲ့ Wallpaperကို အသုံးပြုပြီး ဆိုင်ကို လာမယ့် ဧည့်သည်တွေကို ဆွဲဆောင်­နိုင်ပါတယ်။
စာဖတ်ပရိသတ်အတွက် Wall Art By Xenon ရဲ့ လိပ်စာကို စပ်စုခဲ့ကြပါသေးတယ်။ Wall Art By Xenon ရဲ့ Wallpaper ကို ဆက်သွယ်မှာယူချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Xenon Premium Printing Shop အမှတ်(၇၈)၊ အနော်ရထာလမ်း၊ ၃၉လမ်း နှင့် ၄ဝလမ်း ကြား၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။ ဖုန်း – ဝ၁ ၃၉၈၈၄၄၊ ဝ၉ ၄၂၈၃၀၇၇၇၇၊ ဝ၉ ၂၆၄၅၉၆၇၂၂ သို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းစုံစမ်းနိုင်ပါကြောင်း သတင်းပေး ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
Myanmar Home & Decor Magazine ( Vol- 7, Issue – 5)
Photo – T Kyi Ye Yint ­
Eternity Plus Media & Commmunication
Address: 5/46 (A2), Aung Zeya Street (Via), Kone Myint Yeik Thar Road, Mayangone Township, Yangon, Myanmar.
Phone: 09779922703, 09963599968
E-mail : eternityplanner@gmail.com